Arsenal oo u bandhigtay mid ka mid ah xiddigaheeda muhiimka ah kooxda Paris Saint-Germain – Gool FM
Arsenal oo u bandhigtay mid ka mid ah xiddigaheeda muhiimka ah kooxda Paris Saint-Germain
(London) 25 Agoosto 2020. Sida laga soo xigtay warbixin lagu daabacay wargeyska “Mirror” ee dalka England maamulka kooxda reer London ee Arsenal ayaa waxay u bandhigeen PSG adeega Héctor Bellerín, maadaama naadiga reer France ay raadinayaan saxiixa daafac midig si ay ugu xoojistaan safkooda.
Waxay u muuqataa in maalmihii xiddigga reer Spain Héctor Bellerín ee kooxda Arsenal uu soo dhamaaday, kaddib qeyb weyn ee xirfadiisa kubadda cagta ah uu ku soo qaatay naadiga ka dhisan waqooyiga magaalada London ee Gunners.
Wargeyskan ka soo baxa England ayaa tilmaamay in maamulka kooxda PSG ay doonayaan inay helaan badelka xiddigoodii reer Belgium ee Thomas Meunier, kaasoo u dhaqaaqay naadiga reer Germany ee Borussia Dortmund.
Wargeysku wuxuu tilmaamay in wiilka da’ada yar reer France ee Colin Dagba uu u yahay dooq dheeri ah kooxda PSG, laakiin Héctor Bellerín ayaa ah dooqa koowaad ee booskan, kaasoo si weyn looga doonayo Paris Saint-Germain.
Waxaa xusid mudan in Bellerín uu ku soo dhaqaaqay 2011 kooxda Barcelona una dhaqaaqay Arsenal, tan iyo xiligaas wuxuu maaliyada naadiga Gunners ku ciyaaray 204 kulan tartamada oo dhan, wuxuu dhaliyay 8 gool, halka sidoo kale uu caawiyay 25 gool kale, isagoo la qaaday saddex koob ee kala ah FA Cup, iyo labo koob oo FA Community Shield ah.
Kooxda Chelsea oo todobaadkaan dhammaystiraysa saxiixa Thiago Silva... (Lambarkee ayuu Blues u xiran doonaa kabtankii PSG?)